August Breastfeeding Awareness Month Campaign – BCGE | Business Coalition for Gender Equality
August Breastfeeding Awareness Month Campaign
« #KhitThitPhayPhay Campaign 2020
Research Report Launch – MYANMAR AND COVID-19 IMPACT ON THE PRIVATE SECTOR »
Campaign Objectives ကင်ပိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
– To promote the importance of family-friendly policies to enable breastfeeding and help parents nurture their children
ရင်သွေးငယ်များ ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရန် မိဘများကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသော မိသားစု အဆင်ပြေသည့် မူဝါဒ ထားရှိခြင်း အရေးပါမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်
– To capacitateafamily-friendly workplace by providing lactation room for working mothers
လုပ်ငန်းခွင်ဝင် မိခင်များအတွက် မိခင်နို့ချိုသိုလှောင်ခန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် မိသားစုအတွက် အဆင်ပြေသော အလုပ်ခွင် ဖန်တီးဆောင်ရွက်ရန်
World Breastfeeding Week is celebrated every year from 1 to7August to encourage breastfeeding and improve the health of babies around the world. It commemorates the Innocenti Declaration signed in August 1990 by government policymakers, World Health Organisation, UNICEF and other organizations to protect, promote and support breastfeeding.
ကမ္ဘာ့ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးရေး ရက်သတ္တပတ်ကို နှစ်စဉ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ကျင်းပပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းကို စောင့်ထိန်းရန်၊ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ထောက်ပံ့ရန်အတွက် အစိုးရမူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ယူနီဆက်နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ၁၉၉၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် Innocenti Declaration ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။
မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းက မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာအထိ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းသည် နှစ်စဉ် အသက် ၈၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အများစုမှာ ၆ လအောက်ကလေးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းက မိခင်များကို ရင်သားကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါ ရရှိခြင်း အန္တရာယ် အလားအလာ ကျဆင်းစေပါသည်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းက နှစ်စဉ် ရင်သားကင်ဆာကြောင့် မိခင်သေဆုံးမှု ၂၀,၀၀၀ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ မှ ရင်သွေးငယ်ကို ၆ လမပြည့်မှီအထိ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရန် အထူး အကြံပြုထားပါသည်။ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းကို ၂ နှစ်နှင့်အထက်အထိ ဆက်လက် တိုက်ကျွေးရင် အခြားသော အာဟာရပေး အစားအစာများကို တိုက်ကျွေးနိုင်ပါသည်။
Business Coalition for Gender Equality (BCGE) isanon-profit association encouraging businesses to implement workplace gender equality (WGE). Family-friendly working conditions are an important component under WGE and one of the ways to support them is by providing lactation rooms. As BCGE would like to promote the best practices of business who are takingalead in this initiative, we are launchingacampaign in August for breastfeeding awareness month. Together with our campaign partner, Alive & Thrive, BCGE seeks to promote the importance of family-friendly policies and workplace lactation rooms to enable breastfeeding and help parents nurture and bond with their children in early life, when it matters most.
BCGE သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းခွင် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေး ဆောင်ရွက်ရန် အားပေးတိုက်တွန်း ဦးဆောင်နေသော အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုအတွက် အဆင်ပြေသော အလုပ်ခွင် အခြေအနေ ဖန်တီးရေးသည် လုပ်ငန်းခွင် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေပြီး မိခင်နို့ချိုသိုလှောင်ခန်း ထောက်ပံ့ပေးမှုသည်လည်း အစိတ်အပိုင်း နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ BCGE သည် ဤ စီမံဆောင်ရွက်ချက်ကို ဦးဆောင်နေသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို အားပေးမြှင့်တင်သောအားဖြင့် သြဂုတ်လတွင် မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်း အသိပညာပေးလအတွက် ကင်ပိန်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ချင်ပါသည်။ အဆိုပါ ကင်ပိန်းကို Alive & Thrive နှင့် လက်တွဲ၍ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် မိခင်များ နို့ချိုတိုက်ကျွေးနိုင်ရန် ထောက်ကူပြုပေးပြီး မိသားစုအတွက် အဆင်ပြေသော အလုပ်ခွင် မူဝါဒများ ထားရှိခြင်း၏ အရေးပါမှု မြှင့်တင်အသိပေးရန်နှင့် ရင်သွေးငယ်များ၏ အရေးကြီးဆုံး အသက်တာကာလတွင် မိဘများနှင့် ပြုစုပျိုးထောင်းနိုင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါသည်။
Campaign Activities ကင်ပိန်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ
Follow the BCGE Facebook page, where we will be sharing knowledge about the importance of breastfeeding, the business case for supporting breastfeeding and family-friendly policies, and practical ways for businesses to implement them in their workplaces
Tune in to our online panel discussion on breastfeeding and lactation programs in the workplace and how they can support working mothers (more information will be updated here in the coming weeks)